Marketing amin'ny haino aman-jery sosialy Manan-tsaina mialoha: Tellagence
Zoma, Oktobra 19, 2012 Zoma, Oktobra 19, 2012 Douglas Karr
Ireo mpivarotra dia miraharaha ny media sosialy toy ny ataon'izy ireo amin'ny media mahazatra. Jereo aiza ny ankamaroan'ny masomaso dia manenjika azy ireo. Saingy goavana ny fahasamihafana. Ao anatin'ny tambajotra sosialy, misy hetsika telo:
fandinihana - mpihaino izay manaraka fotsiny sy misambotra ny fampahalalana ho an'ny fampiasan'izy ireo manokana.
fifandraisana - vondrom-piarahamonina mamaly sy manome valiny momba ny vaovao nozaraina.
Promotion - olona ao anatin'ny mpihaino na fiaraha-monina izay mizara ny mombamomba azy ny mpihaino sy / na fiaraha-monina.
Ho an'ireo orinasa mifanerasera amin'ny media sosialy, sarotra ireo hetsika ireo - raha tsy tsy azo atao - ny mamakafaka sy maminavina. Betsaka ny media sosialy Analytics sehatra eny an-tsena, fa ny ankamaroan'izy ireo dia tsy mitombina… manome metatra voafetra hahatratra sy hizara.
Amin'izao fotoana izao dia misy filàna mazava sy miharihary ho an'ireo mpivarotra mba hahatakatra sy hanan-kery amin'ny mety ho fiantraikan'ny marketing ara-tsosialy. Tellagence mamaly izay ilaina. Noforoninay ny siansa izay maminavina ny fihetsika amin'ny tambajotra an-tserasera. Ny Tellagence dia manampy anao hahatratra ny mety ho varotra sosialinao amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny tanjaky ny Twitter.
Tellagence tsy voatery hametraka ny vahaolana amin'ireo olana soratako eto, fa manantena ny hanome faharanitan-tsaina mialoha kokoa ny tontolon'ny varotra sosialy amin'ny ankapobeny izy ireo, manomboka amin'ny Twitter.
Avy amin'ny fanontanian'i Tellagence matetika
Tellagence dia teknolojia faminaniana ara-tsosialy, izay mamoha amin'ny fomba mahomby ny fahasarotana amin'ny fifandraisana amin'ny Internet hahafantarana hoe iza no ho voatosika hampita ny hafatry ny marikao. Ny vokatra voalohany an'i Tellagence, Tellagence ho an'ny Twitter, dia miorina amin'ny algorithms izay manara-maso sy mahatakatra ny dinamikan'ny fifandraisana ao anaty tambajotra. Ity teknolojia mamaky làlana ity dia mitaky ny tontolon-kevitra, mahatakatra ny fiovan'ny fitondran-tena ary miavaka indrindra, mampiasa siansa natsangana mba hahatakarana ny fifandraisana amin'ny olona an-tserasera tsy toy ny vahaolana famakafakana tambajotra hafa.
Ahoana ny Tellagence hafa? Raha orinasa maro no mifantoka amin'ny singa ankapobeny kokoa ho an'ny fanaraha-maso sy fampiroboroboana ny media sosialy - toy ny fikendrena ireo olona manana mpanaraka betsaka na manana ny toeran'ny olo-malaza - Ny siansa Tellagence dia mamantatra sy mamorona fifandraisana lalina sy itadiavan'ny zanabola mba hanomezana marika manan-danja sy azo ekena kokoa.
Tellagence manambady amin'ny siansa fitondran-tena olombelona miaraka amina maodely vinavina azo jerena ho an'ny fahitana ny fiantraikan'ny singa toy ny fandraisana fanapahan-kevitra, fampitomboana na fihenan'ny tanjaky ny fifandraisana ary ny anjara asan'ny tambajotra. Ny vokatra voalohany an'ny orinasa, Tellagence ho an'ny Twitter, dia misambotra ny tontolon'ny resaka ary maminavina amin'ny fandinihana ny dinamika miovaova izay mitranga ao anaty tambajotra iray.
Tags: mahita ny influencershery miasa manginaanalytics influencerfanadihadiana ara-tsosialymarketing ara-tsosialyfitsikilovana marketing ara-tsosialyfahasamihafanaTwitteranalytics amin'ny twitter
B2B Manefesto Generation
19 Okt 2012 amin'ny 2:27 PM
Misaotra fa nanokana fotoana hanoratana ny lahatsoratra Douglas. Izahay dia manohana azy io. Raha afaka mamaly fanontaniana hafa ho anao izahay dia ampahafantaro anay.
30 Nov 2012 amin'ny 5:43 maraina
Zava-dehibe ny fananan'ny ankamaroan'ny orinasa madinidinika pejy Facebook
manangana ny marika, mifampiresaka amin'ny mpanjifa sy ny mpankafy, ary hitazomana
PR tsara. Raha tsy misy Facebook dia afaka ajanona ao aorin'izy ireo ny orinasa
mpifaninana, indrindra ireo izay nisafidy ny handray tanteraka ny media sosialy.